Fo Masin'i Jesoa - Wikipedia
Fo Masin'i Jesoa
1 Fankalazana ny fetin'ny Fo Masin'i Jesoa
2 Niandohan'ny Volan'ny Fo Masin'i Jesoa
3 Halalin'ny Litanian'ny Fo Masin'i Jesoa
4 Misy fampanantenana
Fankalazana ny fetin'ny Fo Masin'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]
Ny Papa Clément XIII no nanorina ny fetin’ny Fo Masin’i Jesoa, tamin’ny 6 febroary 1765. Rehefa nanao fanavaozana ny litorjia sy ny tetiandro ny Kônsily Vatikana Faharoa dia nadraikitra ny fetin’ny Fo Masin’i Jesoa ho fankalazana manetriketrika. Isaky ny zoma fahatelo manaraka ny Pantekôty no ankalazana azy isan-taona. Tsy mijanona ho andro iray tahaka ny fankalazana manetriketrika mahazatra fotsiny anefa ny fetin’ny Fo Masin’i Jesoa fa ny volana Jona iray manontolo no natokana hanjana sy hanehoana fitiavam-bavaka Azy.
Niandohan'ny Volan'ny Fo Masin'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]
Ankizy vavy mpianatra iray, tany Sèvres any Frantsa no nipoiran’ny fanokanana ny volana Jona ho an’ny Fo Masin’i Jesoa. Mpianatra tamina kôlejy antsoina hoe Notre-Dame-des-Oiseaux i Angèle de Sainte Croix, tany amin’ny taona 1860 tany ho any. Voatariky ny fanajana miavaka ny Fo Masin’i Jesoa ataon’ireo Sanoanin’i Md Augustin, akaikin’ny Lalana Sèvres i Angèle, izay mpianatra efa mba lehibebe ihany. Nanana ny faniriana hanokana ny volana Jona manontolo ho fanajana ny Fo Masin’i Jesoa izy, ary tena sahy nangataka tamin’ny Arsevekan’i Paris mba hanatanteraka io faniriany io. Efa voatokana ho an’i Masina Maria moa tamin’izany ny volana Mey ka noheveriny fa mendrika ny Fo Masin’i Jesoa koa ny hanokanana volana iray manontolo tahaka izany. Neken’ny Arseveka izany. Taona vitsy monja taorian’ny1860 dia naorina manerana ny Eglizy manontolo manerantany ny maha volan’ny Fo Masin’i Jesoa ny volana Jona. Mety ho ny Papa Pio IX no nanao izany.
Halalin'ny Litanian'ny Fo Masin'i Jesoa[hanova | hanova ny fango]
Hoy ny Papa Joany Paoly Faharoa, tamin’ny Katesizy tamin’ny alarobia 20 juin 1979, roa andro mialohan’ny fetin’ny Fo Masin’i Jesoa : « Fantatra fa ny volana Jona dia natokana amin’ny fomba miavaka ho an’ny Fon’Andriamanitra, ny Fo Masin’i Jesoa. Asehontsika anatin’izany ny fitiavanatsika sy ny fitsaohantsika Azy amin’ny fanaovana ny litania. Amin’io litanian’ny Fo Masin’i Jesoa io, isaky ny teny atao dia feno teny momba an’Andriamanitra lalina dia lalina avokoa ». (Dikateny malalaka). Izao no azo ambara momba ny litanian’ny Fo Masin’i Jesoa. Maro ny boky fivavahana navoaka ara-dalàna araka ny Lalàn’ny Eglizy ahitantsika ny litanian’ny Fo Masin’i Jesoa : Vavaka sy hira, Vavaka Andavanandro, sns. Maro ireo litania mety hitantsika any ho any fa ny anatin’ny boky misy fanomezan-dalana hatonta « imprimatur » dia efa nankatoavin’ny Papa Léon XIII tamin’ny teny latinina tamin’ny taona 1899. Nambara tao amin’ilay fanambarana « Enchiridion Indulgentiarum » navoaka tamin’ny taona 1999 fa mahazo Indolzansy amin’ny ampahany, araka ny fepetra mahazatra, ny mpino izay manao amim-pinoana sy amim-pitiavam-bavaka tokoa ny litanian’ny Fo Masin’i Jesoa.
Ny Fon’i Jesoa be fitiavana sy mpamindra fo no deraina sy angatahana amin’io litania io. Toy izao ny tantaran’ny litanian’ny Fo Masin’i Jesoa. Vehivavy iray antsoina hoe Anne-Madeleine Rémusat izany no nanoratra vavaka misy fiantsoana miisa 27 atao amin’ny Fo Masin’i Jesoa. Tamin’ny taona 1718 no nanaovany izany. Tsy dia hoe io vehivavy io avokoa akory anefa no tena niteny voalohany ireo teny atao amin’ny litania ireo fa efa misy 17 amin’ireo fiantsoana ireo, noraisiny tamina soratra navelan’ny Mompera iray atao hoe Croiset, tamin’ny taona 1691. Taty aoriana, dia nisy vavaka fiantsoana fanampiny miisa 6 natovan’ny Sampandraharaha tao Roma miandraikitra ny satam-pivavahana (Congrégation des rites), tamin’ny taona 1686, izay avy amin’ny Masera iray atao Madeleine Joly. Ity Masera ity no namorona io fiantsoana natovana io. Mba ho azo ataon’ny vahoaka rehetra, ary hanehoana sy hiainana fitiavam-bavaka marina tokoa dia tsy maintsy mahazo fankatoavana aloha ilay litania vao naely.
Ny papa Léon XIII no nanome ny alalana tamin’ny 1899. Ankehitriny dia miisa 33 ireo fiantsoana avantana amin’ny Fo Masin’i Jesoa anatin’io litania io. Ny tsirairay amin’ireo tonombavaka fohy ireo dia samy maneho sy manasongadina ny fitiavana lehibe ananan’Andriamanitra ho antsika olombelona. Aseho amin’ny endriky ny fo maha olombelona an’i Jesoa ny fanambarana izany zava-dalina ao amin’Andriamanitra ho antsika izany. Tia loatra an’izao tontolo izao Andriamanitra. Nirahiny ho ety amintsika i Jesoa, mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy fa tsy hisy ho very na iray aza. (Jo 3, 16). Maro ireo fiangonana eo ambany fiarovan’ny Fo Masin’i Jesoa. Tahaka izany koa ireo Sekoly sy toeram-panabeazana. Maro dia maro ny fikambanan-drelijiozy na lahy na vavy no mitondra ny anaran’ny Fo Masin’i Jesoa. Ny Misterim-pamonjena sy ny fanavotana mihitsy manko no ambaran’ny Fo Masin’i Jesoa. Manome dikany ny maha kristianina antsika ny Fo Masin’i Jesoa. Sady anton’ny finoantsika sy ny fanantenantsika ary ny fitiavantsika an’Andriamanitra mihitsy izy.
Misy fampanantenana[hanova | hanova ny fango]
Mankalaza sy maneho fanajana ny Fo Masin’i Jesoa isika satria te-hankasitraka an’Andriamanitra amin’ny fitiavany mihoapampana. Te-hisaotra an’i Jesoa koa noho ny fitiavany tena mivaivay mba hamonjy ny olombelona mpanota. Misy ilay vavaka « fampodian-kaja amin’ny Fo Masin’i Jesoa », nahay an’io vavaka io fatratra ny raiamandreny taloha. Adidy ny fampianarana io vavaka io ny ankizy ao an-trano, any an-dakilasy, any anaty fikambanana masina fa sady manampy antsika handresy ny fahotana no mampitombo ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny namana. Nisy fampanantenana miisa 12 moa nambaran’i Jesoa tamin’i Mb Marguerite-Marie. Fanirian’i Jesoa mba hisy ny sarin’ny fony masina ny tokantrano rehetra. Anisan’ny irîny koa ny famonjentsika ny Zoma voalohany isam-bolana, ary narahiny fampanantenana koa izany, ho an’izay mahavita mamonjy Zoma voalohany in-tsivy mifanarakaraka. Isika mpino tsirairay mihitsy no angatahin’i Jesoa hanokatra ny fotsika amin’ny fony be fitiavana ka hanolo-tena ho azy.
Nanoratra : Tsiky Marcel (Grand Séminariste Diôsezy Ambositra)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fo_Masin%27i_Jesoa&oldid=997400"
Voaova farany tamin'ny 22 Septambra 2020 amin'ny 11:07 ity pejy ity.